How to take care after a circumcision – chaps
How To Take Care Of Yourself After A Circumcision
Dressing (bandage): Remove the dressing (bandage) three days after your circumcision.
How To Approach Potential Problems
You may see some blood through the dressing after your circumcision but, don’t worry – it is normal.
Take the pain medication that was given to you at the clinic as instructed by the nurse.
Your follow-up visit should take place 2 to 3 days after your circumcision.
NB: If you notice any problem or unusual healing process, do not hesitate to go back to the centre or go to your nearest clinic for assistance.
Imigomo Okumele Ilandelwe Noma Iqashelwe Yiziguli Emva Kohlinzo Lwe-circumcision
Ukufaka ibhandishi- ibhandishi yakho ungayikhipha emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kokwenza i-circumcision.
Izimpahla nokuhlanzeka- uma nje ibhandishi yakho usuyikhiphile ungasophi, kumele ugqoke isikhindi sangasese esixegayo futhi esihlanzekile wenze nokuthi naso usishintsha malanga wonke. Kubalulekile futhi kusemqoka ukuthi ugeze inxeba ngokusebenzisa usawoti uwufake emanzini kathathu ngosuku.
Izinkinga Ongazibona Nokuthi Ungabhekana Nazo Kanjani
Ukopha emuva kohlinzo
Ungalibona igazana ebhandishini emuva kwe-circumcision kodwa lokhu akuyona inkinga vele kuyenzeka kanti kuyinto ejwayelekile. Uma igazi liqhubeka liphuma emuva kohlinzo, bamba isitho sakho sobudoda ngesandla njengoba wakhonjiswa umhlengikazi wasemtholampilo bese ucindezela kuleyo ndawo eyophayo, uma igazi liqhubeka, qhubeka ucindezele usebenzise amandla asezingeni eliphansana imizuzu emihlanu ukuya kwimizuzu elishumi nanhlanu (5-15) ucindezela imizuzu emihlanu ngokuhlukana. Hlola ukuze ubone ukuthi awusophi na, uma kuqhubeka ukopha qhubeka ngokuyibamba ucindezele, bese ushayela inombolo yosizo oluphuthumayo owanikwa yona. Usungaya ke e-CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe udokotela.
Izinhlungu ozizwayo emuva kohlinzo
ezinye izinhlungu emuva kohlinzo ziyinjwayelo noma emuva kohlinzo uye unikezwe amaphilisi ezinhlungu. Kumele uthathe amaphilisi ngendlela otshelwe ngayo emtholampilo. Uma izinhlungu zizangamandla lapho ungazibandakanya ne- CIRCUMCISION CLINIC noma ushayela inomobolo yosizo oluphuthumayo, ukuze uthole usizo olusheshayo, nezaluleko ezinzulu.
Uma ubona kuphuma ubovu, ukuvuvuka kakhulu okubuhlungu, ukungakhoni ukuchama noma umchamo ophuma kabuhlungu, uyacelwa ukuthi ubuyele e- CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe futhi ulashwe ngudokotela uma utholakale nalezizimpawu.
Naku okubalulekile kakhulu!
Ungalinge uye kuluphi naluphi uhlobo lwezocansi noma (ìndlwabe/skomora) kuze kufike amaviki ayisithupha emuva kwe-circumcision. Emva kwalokho kuzomela usebenzise i-condom ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi isitho sakho sangasese siphole ngokuphelele nokuvikela isilonda ekumoshakaleni. Kubalulekile futhi ekusulekeni nasekutholeni izifo ezisulelana ngezocansi (sexually transmitted infections) kanye ne-HIV/AIDS. Khumbula, ngezocansi eziphephile okumele zisetshenziswe ukuvikela wena ukuze ungatholi i-HIV (kubandakanya nokusebenzisa i-condom).
Amalanga akho okuvakashela emtholampilo
Ukuvakasha kwakho kuyoba ngemuva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kwe-circumcision yakho. Uyacelwa ukuba ungeqisi amalanga akho okuvakashela emtholampil, kubalulekile ukuze uhlolwe ngudokotela noma umhlemgikazi oqeqeshiwe.
IZIFUNDO NGOKUGEZWA KWESILONDA NGEMUVA KOKUSOKWA
Ukulungiselela ukugeza isilonda.
Hlanganisa amatisipuni amabili osawoti enkomishini eyodwa yamanzi afudumele.( inkomishi ngayinye ihambisana namatisipuni amabili kasawoti)
Ungazigcina kanjani uhlanzekile?
Kubalulekile ukugeza izandla njalo ngaphambi kokuthinta isilonda.
Uma ushintsha ingubo yangaphansi njalo, lokho kungavimbela ukuthi usilonda singaboli.
Kungcono ukubekezelela ubuhlungu bokugeza isilonda, kunokuba sibole ngenxa yokuba singahlanzekile.
Sebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile ngaso sonke isikhathi ukugeza lapho kuthungwe khona.
Ngemuva kokusokwa kufanele ukhiphe ibhandishi ngosuku lwesithathu.
Ngemuva kokukhipha ibhandishi, kungenzeka wophe kancane okanye ungophi. Umangabe uyopha, bamba uqinise lapho kopha khona imizuzu emihlanu kuya kweyishumi nanhlanu (5-15 minutes).
Lapho ukopha sekuphelile, kubalulekile ukugqoka ibhuluko langasese (underwear) elingakubambi, bese ulishintsha zonke izinsuku.
Umangabe wopha ngamandla, ukumfimfa, noma kuphuma ubomvu, siza uphuthume emtholampilo (clinic) lapho umhlengikazi ezokucwaninga maqede ashintshe ibhandishi ukuze uphinde ubuye ngelanga elilandelayo.
Kubalulekile ukugeza isilonda kabili okanye kathathu ngosuku usebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile, ngokuhlanganisi inkomishi eyodwa yamanzi afuthumele kanye namathisipuni amabili kasawoti.
Geza ngokucophelela phakathi kwemithungo ngapahndle kokuyisumpula ukuvikela ukupha noma ukubola. uthungwe khona ukwenzela ukuthi isilonda singaboli noma sophe. Kubalulekile ukugcina isilonda sihlanzekile futhi somile zonke izinsuku. Khumbula ukugcina ugwayi wakho ubheke phezulu izinsuku eziyishumi nane (14 days), ngokusebenzisa isaloteyipu oyinikwe emtholampilo (clinic) okanye usebenzisa ingubo yangasese ukulekelela ugwayi ukuze ubheke phezulu.
NB: Uma uhlangabezana nenkinga okanye ukuphola okungajwayelekile, ungesabi ukubuya uzohlolwa futhi, okanye usithinte kulenombolo (0800448024), noma uye emthilampilo (clinic) eseduzane.